Ngokuqhelekileyo, xa besithumela ifayile ye-dwg kudla ngokuba yingxaki ngenxa yenguqulo abayigciniweyo. Nazi ezinye iindlela zokusombulula ingxaki: Yiyiphi inguqu ye-dwg Oku akunakwenzeka ukuchonga, kuba ifayile inokwandisa .dwg okanye .dxf kodwa ayiyaziwa de sizama ukuyivula ...
Google Earth 7 imida catch ortho imifanekiso bulungiswe
Xa uguqulelo olutsha lwe-Plex.Earth 3 luya kuphuma, siyaqonda ukuba ngelixa lixhasa umthwalo weenkonzo zeemephu zeenkonzo zewebhu, inzuzo enkulu ekuye kwangoku ikhutshwe umfanekiso weGoogle Earth oqoshiwe ... Ngeke kube lula. Oku kukuba, i-Google, ijonge ukuphepha ...
I-Plex.Earth 3.0, endibenayo ixesha lokuzama xa ndichaza umhla wokufumaneka kwinguqu ecacileyo, ifikile kum. Mhlawumbi ngenyanga kaNovemba ka-2012. Qalisa nge-AutoCAD 2013 Mhlawumbi intsha kakhulu, ngaba le nguqulo yenziwe ngokukodwa kwi-AutoCAD 2013, okanye nayiphi na yayo ...
Abanye ixesha eyadlulayo sipapashe inguqulelo yale khosi AutoCAD simahla, ke ngoku lukhutshiwe ukuze AutoCAD version 2013, apho kwaye ungalayisha kwicandelo lokuqala kwekhululekileyo ngaphezu: Ngoku unako ukuthenga ukuba umxokozelo! Kutheni i-Free AutoCAD Course? Ibizwa ngokuba yi-Free AutoCAD Course ...
AutoCAD-AutoDesk, Ukulanda, Ukufundisa i-CAD / GIS, Okufumaneka
Kuze kube ngoku kwakuqhelekile ukubona i-UTM kunye neendawo zokudibanisa kwiGoogle Maps. Kodwa ngokuqhelekileyo kugcina i-datum exhasa i-Google eyi-WGS84. Kodwa: Kuthekani ukuba sifuna ukubona kwiGoogle Maps, ulungelelaniso lwaseColombia kwi-MAGNA-SIRGAS, iWGS72 okanye i-PSAD69? Ulungelelaniso lweSpeyin e-ETRF89, i-Madrid 1870 okanye i-REGCAN 95? ...
Ngalesi nqaku siyakwamkela ubuso obutsha obuneendawo ezisemthethweni ze-CivilCAD, umsebenzi omhle wabahlobo be-ARQCOM kwiminyaka ye-15 kunye nabasebenzisi abangaphezu kwe-20,000 eLatin America. Kwiqendu lawo elitsha "amaTutorials" baye baquka imisebenzi enomdla kunye nesinyathelo esinengqiqo ngesinyathelo. ...
Sisoloko sibona umbuzo apho, malunga apho uguqulelo ingcono okanye kutheni ukukhusela; ke xa kufika umntu omtsha bathi oko kuphela makeup. Ekugqibeleni, njengesiqalo senza ningabuzi Facebook, apho egeomates uye abalandeli 18,000, ubone ukuba yintoni impendulo yaba: AutoCAD 2012 limi, siyaqonda ...
umbono elicingelwayo kunye necandelo ngokusika AutoCAD 2013
Phakathi utshintsho kakhulu kwiinguqulelo zakutshanje AutoCAD isebenza ngemizekelo 3D. IiForam ne AutoCAD 3D udidi ucele ukuba izinto ezithile buchopho uya uguqulelo esisiseko kwaye mhlawumbi bathobele lo AutoDesk utshintsho isicelo ukusuka iinguqulelo 2010, nangona kukho inkqubela ...
Olu phuhliso summary table babe AutoCAD 2013 malunga utshintsho ingxelo yi AutoDesk kwi iinguqulelo ezintsha (AutoCAD 2012, 2011 kunye 2010) Kucacile ukuba ezi izenzakalo eziphawulekayo Iingxelo AutoDesk, ezinye zezi aguqulwe kancincane okanye zaphucula ezinye iinguqulelo kunye nezinye zazinomsebenzi omncinci ...
Ezinye zezinto ezintsha esizibonile kwinguqu ye-beta ye-AutoCAD 2013 umnxeba wale ngqungquthela isitshela ukuba zeziphi iindlela esiza kuzibona ngo-Apreli wonyaka we-2012, xa iza kuqaliswa ngokusemthethweni; nangona sitshisa nje into entsha kwi-AutoCAD 2012. Ukususela ekuqaleni iindaba eziye zaziwa: Iifom entsha ye-DWG 2013! Yintoni ...